फर्सी खाऊँ, बुढ्यौली भगाऊँ! – Everest Dainik – News from Nepal
फर्सी खाऊँ, बुढ्यौली भगाऊँ!
काठमाडौंः फर्सीमा ९० प्रतिशत पानी हुन्छ । यसलाई फलको श्रेणीमा समेत राखिन्छ । यो शरीरका लागि अत्यावश्यक फाइटोन्युट्रिन्टसको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतमध्ये एक हो । यसको नियमित उपयोगले उमेरको प्रक्रियालाई समेत मत्थर गर्ने मानिन्छ ।
आहार विशेषज्ञहरूका अनुसार फर्सी हृदयरोगीका लागि अत्यन्त लाभप्रद छ । यो कोलेस्ट्रोल कम गर्ने, चिसो बनाउने र मूत्रबर्धक मानिन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा रेसा (फाइबर) पाइन्छ । त्यसैले पेटको गडबडीमा समेत फर्सी फाइदाजनक छ ।
फर्सीले चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ । यसले प्यांक्रियाज अग्न्यासयलाई समेत सक्रिय पार्छ । यसैले चिकित्सक मधुमेहका रोगीलाई फर्सी खाने सल्लाह दिन्छन् । फर्सीको रससमेत फाइदाजनक मानिन्छ । यो जानकारी आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: फर्सी, बुढ्यौली